China Corrugated GL Galvalume Simbi Roofing Sheet For Peru fekitari uye vagadziri |Zhanzhi
Corrugated GL Galvalume Steel Roofing Sheet YePeru
Galvalume corrugated simbi shiti imhando yerata ine marata akaumbwa nekukunguruka uye kutonhora kukotama.Inokodzera kushongedzwa kwematenga, madziro uye mukati nekunze madziro ezvivakwa zveindasitiri uye zvehurumende, matura, zvivakwa zvakakosha uye refu-span simbi chimiro dzimba.
2.Grade: DX51d, G550, nezvimwewo zvose maererano nechikumbiro chemutengi
3.Spangle: nguva dzose spangle, spangle duku, huru spangle
4.Kukura: 0.12mm-1.0mm, zvose zviripo
6. Kureba: maererano nezvinodiwa nemutengi
7.Alu-zinc kupfeka: 30-150gsm
8. Kurapa kwepamusoro: Kurapa kwemakemikari, mafuta, yakaoma, Kemikari kurapwa nemafuta, anti-finger print.
9. *Raw material 762mm kusvika 665mm(mushure memarara) uye 9 masaisai;
* Raw zvinhu 914mm kusvika 800mm-890mm (mushure memarara) uye gumi nerimwe masaisai;
* Raw zvinhu 1000mm kusvika 900mm kana 920mm (mushure memarara) uye gumi nemaviri kana gumi nemasaisai;
*Raw zvinhu 1200mm kusvika 1070mm (mushure memarara) uye 17 masaisai zvakare anogona kugadzira senge.
Corrugated galvalume simbi yedenga pepa ine hunhu hwehuremu huremu, simba rakakura, ruvara rwakapfuma, kuvaka kuri nyore uye nekukurumidza, kuramba kwekudengenyeka kwenyika, kudzivirira moto, kudzivirira kunaya kwemvura, hupenyu hurefu uye kusagadzirisa-isina nezvimwewo, uye yakafarirwa zvakanyanya uye inoshandiswa.
(1) Yakanaka uye inoyevedza chimiro, akapfuma mavara, kushongedza kwakasimba uye inochinjika musanganiswa, iyo inogona kuratidza akasiyana masitaera ekuvaka;
(2) Chiedza chakafa huremu, simba rakakwirira, kuoma kweganda rakanaka, uye kuita kwakanaka kwekudengenyeka kwemvura kweagent;
(3) Hunhu hwepamusoro hwezvigadzirwa zvefekitari
(4) Kuvaka uye kuiswa kwakaringana, kuderedza basa rekuisa uye kutakura uye kupfupisa nguva yekuvaka;
(5) Iyo profiled simbi pepa inzvimbo-inoshamwaridzika yekuvakisa, inogona kushandiswazve.Kufarirwa uye kushandiswa kwesimbi yakashongedzwa kunoenderana nemutemo wekusimudzira hupfumi hwenyika.
(6) Zvishandiso zveMonomer zvinodhura uye hazvina kusimba zvakanyanya kana zvichienzaniswa nekongiri kana masonry enclosure zvinhu.
Corrugated galvalume simbi yedenga pepa inokodzera maindasitiri uye zvivakwa zvevagari, matura, akakosha zvivakwa, matenga, madziro uye mukati uye kunze kwemadziro kushongedza kwehombe-span simbi chimiro dzimba, nezvimwe.